UJeff Thamsanqa Radebe – The Ulwazi Programme
UJeffrey Thamsanqa “Jeff” Radebe wazalelwa e-Cato Manor eThekwini ngo-1953 futhi wahlala khona kwaze kwaba ngu-1958 lapho umndeni wakhe ususwa ngenkani waya Kwa-Mashu. Uthole iziqu ze-B. Juris Degree e-University of Zululand ngo-1976; LLM ku-International Law e-Leipzig University wafundza e-Lenin International School, e-Moscow.
URadebe wajoyina i-African National Congress (ANC) ngesikhathi kuvukelwa izitshudeni ngo-1976 wasebenzisa izincwadi zakhe ukuze abe ngummeli eThekwini. Ngo-1977 walishiya leli waya e-Mozambique wabe eseya e-Tanzania, ngokuyalelwa yi-ANC. Wathola ukuqeqeshwa kwezempi noMkhonto weSizwe (MK), kodwa waboshwa futhi walahlwa yicala ngaphansi koMthetho Wobuphekula kahulumeni wobandlululo ngemuva kwemishini eyimfihlo engaphumelelanga ye-ANC. URadebe wagwetshwa iminyaka eyishumi ejele e-Robben Island wadedelwa ngo-1990 ngemuva kokuhlela isiteleka sezinsuku ezingu-12 sokulamba ukusheshisa ukukhululwa kweziboshwa zepolitiki. Ngemuva kwalokho waba ngusihlalo weSifunda we-ANC we-Southern Natal Region, wasebenza njenge-Natal Regional Dispute Resolution Committee nanjengosihlalo we-Regional ANC Peace Forum. Ngo-1995, waba yilungu le-Ex Political Prisoners Committee.
Mayor of eThekwini, Cllr James Nxumalo & Minister Jeff Radebe
Phakathi kwezinye izinto azuzile, uthole iziqu zobudokotela ngokuhlonishwa nge-Humane Letters yi-Chicago State University kanye ne-Leucospermum imbali eyaqanjwa ngokuthi i- Radebe Sunrise anikezwa yona ngo-2005. Waklonyeliswa nge-Honorary Colonel by yi-South African Air Force, Mobile Deployment Wing ngo-2006.
Uyilungu lekhabhinethi elihlale isikhathi eside kunawo wonke eNingizimu Afrika futhi ubeyingxenye yabo bonke abaphathi bangesikhathi sobandlululo. Usebenze njengoNgqongqoshe eMnyangweni Wezemisebenzi Yomphakathi (1994-1999), uMnyango Wezamabhizinisi Kahulumeni (1999-2004) kanye noMnyango Wezokuthutha (2004-2009), uNgqongqoshe Wezobulungiswa Nokuthuthukiswa Komthethosisekelo (2009 – 2014) kanye noNgqongqoshe eHhovisi likaMongameli (2014 – 2018). Ubambe iqhaza ekwakheni uHlelo Lukazwelonke Lokuthuthukiswa Kwezimpikiswano, oluhlose ukuqinisekisa ukuthi bonke abantu baseNingizimu Afrika bathola izinga eliphakeme lokuphila ngokuqeda ububha kanye nokunciphisa ukungalingani.
UJeff ushade noBridgette Radebe, usomabhizinisi wesifazane wokuqala omnyama waseNingizimu Afrika wezimayini.
Izithombengezilokotho ze- www.sandtonchronicle.co.za.